Nafana hatrany ny fandraisan'ny vahoaka tao Manjakandriana an’i Marc Ravalomanana omaly, ka mankasitraka hatrany, hoy izy.
Fanambin’ny vahoaka ny hoe: atao voalohany amin'ny isan-jato i Manjakandriana, fanamby sy fanomezan-toky koa no omeko anareo voasoritra anatin'ny "manifesto", mandroso ary mahalala ny lalana aleha no toromarika, hoy i Dada.
Nohazavain’i Marc Ravalomanana tany Fenoarivobe omaly ny paik'ady hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana, hatsaraina ny fiompiana omby ary hampitomboina ny isany eran'i Madagasikara. Tsy adinoina ny famerenana ny tetikasa fampianarana mba hiditra an-tsekoly ny zaza Malagasy.
Faly tena faly nahita ny fahavitrihanareo teto Mandoto manohana ahy. Ny fanomezan-toky omeko anareo dia efa voasoratra ao anatin'ny "manifesto" : haverina indray ny fandriampahalemana, hamerina ny rafitra fitsaboana, hampitomboina ny fidiram-bola amin'ny famoronana asa... hoy i Marc Ravalomanana.
Noho ny faha-70 taonan'ny fiarovana ny zon'olombelona dia nitsidika ny Ecole Privée Ravinala teny Ampitatafika ny Association Andrimaso omaly maraina. Nisy ny fampahafantarana ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny tonga nanatrika ny mahakasika ny zon'ny ankizy. Taorian'izay dia nisy fizarana kilalao ho an'ny mpianatra rehetra.